दाङका व्यापारी श्रेष्ठको हत्त्यामा १७ वर्षीय युवती प्रयोग गरेको खुलासा – Everest Dainik – News from Nepal
दाङका व्यापारी श्रेष्ठको हत्त्यामा १७ वर्षीय युवती प्रयोग गरेको खुलासा
दाङ, असार १७ । तुलसीपुरका व्यापारी राजकुरमा श्रेष्ठको अपहरण र हत्यामा सम्लग्न चार जना व्यक्तिलाई प्रहरीले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ । अन्य चारजना फरार रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
अपहरण र हत्याको कारण भने फिरौती नै रहेको प्रहरीले बताएको छ । तर श्रेष्ठको अपहरण र हत्यामा कास्कीको पोखरा र धादिङ जिल्ला सम्मका अपराधिक व्यक्तिहरुको सम्लग्नता रहेको खुल्न आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेका चार अभियुक्त
रोल्पा जिल्लाको जम्कोट १ घर भइ हाल घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने ४० बर्षीय रमेश भन्ने मनबहादुर पुन, पवन नगर १ हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ निवासी २३ बर्षीय रुगत थापा मगर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ निवासी २५ बर्षीय कमल भन्ने अविरल महतरा र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ नयाँ बजार निवासी ३८ वर्षीया जमा पुनलाई प्रहरीले श्रेष्ठको अपहरण र हत्यामा सम्लग्न भएको भनि सार्वजनिक गरेको हो ।
फरार भनिएका मुख्य योजनाकार
प्रहरीले मुख्य योजनाकार सल्यान झिम्पे ४ निवासी ३५ बर्षीय मानबहादुर भण्डारी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ निवासी १७ बर्षीया पूजा घर्ती मगर र साविक शान्तिनगर गाविस वडा नं. २ तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ निवासी ४० बर्षीय टीकाराम घर्ती फरार रहेको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी दिएको छ । तर मुख्य योजनाकार सबै फरार रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ । फरार व्यक्तिहरुको वारेमा जानकारी दिनेलाई प्रहरीले फेरि पनि एकला रुँपैया रकम पुरुस्कारको घोषणा गरेको छ । यसअघि पनि प्रहरीले सूचना दिनेलाई एक लाख रकमको घोषणा गरेको थियो ।
श्रेष्ठको अपहरणमा युवती प्रयोग
श्रेष्ठको अपहरणमा युवती प्रयोग भएको पत्रकार सम्मेलनमा राप्ती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एवं एसएसपी ज्ञान विक्रम शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेठ २६ गते साँझ तुलसीपुर ६ निवासी १७ बर्षीय पूजा घर्ती मगरले फोन गरि व्यापारी श्रेष्ठलाई सल्यान घुम्न जाने नाटक गरि अपहरण गराउन भूमिका खेलेकी थिइन । ‘बाबु र छोरीको समेत अपहरणमा सम्लग्नता देखियो ।’ एसएसपी शाहले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
श्रेष्ठको अपहरण र हत्याको कारण पैंशा प्राप्ती कै लागि भएको प्रहरीले बताएको छ । ‘कुनै रिसिवीका कारण श्रेष्ठलाई अपहरण गरेको देखिदैन , उदेश्य फिरौतीकै लागि देखियो ।’ एसपी सिंहले भने । श्रेष्ठको अपहरणमा सम्लग्न सबै व्यक्ति अपराधिक पृष्ठ भूमिका रहेको र सबै पटक ÷ पटक जेल परेका व्यक्तिहरुको रहेको दाङका प्रहरी प्रमुख एवं एसपी धिरज प्रताप सिंहले त्यसक्रममा जानकारी दिएका थिए । प्रहरीले राजकुमार श्रेष्ठ संगै अपहरणमा परेका भनिएका घोराहीका युवा रनबहादुर घर्तीमाथि पनि शंका गरेको छ ।‘अपहरणमा परेको भएपनि रनबहादुर घर्तीसंग उनीहरुको पहिले देखि नै परिचित हुनु र पछि घर्तीपनि अपहरणकारी संगै मिलेर निस्किएकोले केही भूमिका उस्को पनि हुनसक्छ ।’ अनुसन्धानका डिएसपी विवश लोहनीले भने । ‘यदी रनबहादुर घर्ती इमान्दार भएको भए प्रहरीको सम्पर्कमा आउने थिए , तर उनी उल्दै अपहरणकारी संगै गएको देखियो ।’ । प्रहरीले श्रेष्ठको अपहरणमा बाब– छोरी र भाञ्जीको समेत प्रयोग भएको पाईएको जानकारी दिएको छ ।
श्रेष्ठको विभत्स हत्या
यसैबीच अपहरणकारीले व्यापारी श्रेष्ठको विभत्स ढंगले हत्या गरेको प्रहरीले बाएको छ । ‘ अशक्त भएर उहाँ लडेपछि ढुङ्गाले हानेर विभत्स ढंगले हत्या गरेको पक्राउ परेकाहरुले वयान गरेका छन् ।’ पत्रकार सम्मेलनमा डिएसपी लोहनीले भनेका थिए । २६ गते साँझ अपहरण गरे लगतै लगातार तीनरात तीन दिन आँखामा पट्टी लगाएर हिडाएको र श्रेष्ठ मधुमेहका विरामी भएकोले खाना वस्नको व्यवस्थापन नहुँदा हिड्दा हिड्दै ढलेपछि ढुंगाले कुटेर हत्या गरेको भन्ने खुल्न आएको लोहनीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । ‘आँखामा पट्टी बाँधेर लगातार तीन दिन हिडाउँदा श्रेष्ठ कमजोर भएर लडेपछि ढुङ्गामा लागेर टाउको बाट रगत आएको र त्यसपछि ढुङ्गाले कुटेर विभत्स ढंगले हत्या गरेको देखियो ।’ डिएसपी लोहनीले भने । उनीहरुले अशक्त अवस्थामा पुगेका व्यापारी श्रेष्ठको मानविय नाताले उपचार गर्नुको साटो विभत्स हत्या गरेको भन्ने वयान दिएको प्रहरीले बताएको छ । अपहरणकाकारीले १० केजी च्यूरा मात्रै लगेर गएको हुँदा तीन दिन सम्म त्यही खाएको र जंगलमै बसेको खुल्न आएको प्रहरीले बताएको छ । त्यसक्रममा मधुमेहका विरामी श्रेष्ठ अशक्त भइ ढलेपछि उनको ढुङ्गाले थिचेर हत्या भएको भन्ने खुल्न आएको प्रहरीले बताएको छ ।
हत्या पछि तीन करोड फिरौती माग
यसैबीच जेठ २९ गते श्रेष्ठको हत्यापछि पनि अपहरणकारीले परिवारजन संग फिरौती मागेको खुल्न आएको छ । भारतवाट फोनगरी भारतीय व्यक्तिले हिन्दीमा तीन करोड रुँपैंया परिवार जनसंग मागेको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो । ‘ २९ गते साँझ फेरि अपहरित श्रेष्ठ संग कुरा गरेपपिछ गरौंला अनि रकम दिउँला भन्ने कुरा भएको थियो, तर अपहरणकारीले त्यही दिन विहानै नै श्रेष्ठको हत्या गरेकोले साँझ कुरा गराउन सकेनन् र त्यसपछि फेरि फिरौतिका लागि फोन आएन ।’ एसपी धिरज प्रताप सिंहले पत्रकार सम्मलेनमा भने । प्रहरीले गहिरो गरि अनुसन्धान गर्दा उक्त आवाज श्रेष्ठको हत्या पहिले नै रेकर्डेट आवाज भएको जस्तो रहेको प्रहरीले बताएको छ । ‘आवाज निकै सानो छ र त्यो रेकर्डेट नै हो भन्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।’ एसपी सिंहले भनेका थिए । देश भित्रकै कास्की र धादिङ लगाएतका अपराधिक पृष्ठ भूमि रहेका व्यक्तिहरुको समेत सम्लग्नता रहेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ । उनीहरुको खोजिकार्य जारी रहेकोेले प्रहरीले नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । तर प्रहरीले अहिले सम्म आशंका गरिए जस्तो बाहिरी देश भारतका अपराधिक समुहको सम्लग्नता नदेखिएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ । अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका तीन जना भारतीय नागरिक निर्दौश रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
शुक्रवार अपहरणमा परेका श्रेष्ठको शव शुक्रवार नै फेला
गत जेठ २६ गते साँझ शुक्रवार अपहरणमा परेका श्रेष्ठको शव असार १६ गते शुक्रवारका दिन नै फेला परेको हो । प्रहरीले तुलसीपुर ६ निवासी २५ बर्षीय कमल भन्ने अविरल महतरालाई कास्कीको पोखरावाट पक्राउ गरेर ल्याएपछि श्रेष्ठको शव भएको स्थानको पहिचान गर्न सजिलो भएको प्रहरीले बताएको छ । ‘ हामीले महतरालाई अघिल्लो दिन पोखरा वाट पक्राउ गरेर ल्याएका थियौं, र उसैको वयानका आधारमा श्रेष्ठको शव पत्ता लगाउन सकेका हौं ।’
श्रेष्ठको शव सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नं. ४ को रैजेखुटी स्थित घना जंगल (झिम्पे टावरको मुनी) श्रेष्ठको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । जेट २७ गते विहान व्यापारी श्रेष्ठको बा ११ च १०७१ नम्वरको निजी कार र भारतीय नम्वर प्लेटको एचपी ११८६४८ नं.को भारतीय नम्वर प्लेटको गाडि सल्यान जिल्लाको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ मेलखोला स्थित भित्री कच्ची सडक खण्डमा फेला परेको थियो । श्रेष्ठको कारको हावा फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । यसैबीच अपहरणपछि हत्या गरिएका व्यापारी राजकुमार श्रेष्ठको अन्तिम संस्कार तुलसीपुरको सितलपुर स्थित ववई घाटमा शनिवार गरिने भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघले तीन दिन शोक मनाउने
यसैबीच तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले संघका पूर्व उपाध्यक्ष एवं आजिवन सदस्य राजकुमार श्रेष्ठको अपहरण पछि भएको हत्याको विरोध गर्दै शोकमा तीन दिन सम्म व्यवसाय वन्द गर्ने भएको छ । संघका अध्यक्ष विमल रिजालको अध्यक्षतामा शुक्रवार वसेको आकस्मि बैठकले श्रेष्ठको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै तीन दिन सम्म शोक मनाउने निर्णय गरेको हो । तीन दिन सम्म बजार र सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय भएको संघका प्रेस सल्लाहाकार शरद रेग्मीले जानकारी दिए । यसैबीच संघको आकस्मिक बैठकले श्रेष्ठको अपहरण र हत्यामा सम्लग्न सबै व्यक्तिहरुको पहिचान गरि उनीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन प्रहरी प्रशासन संग माग पनि गरेको छ । यसैबीच श्रेष्ठको अपहरण पछि भएको हत्याको विरोध गर्दै राप्ती अञ्चल सार्वजनिक वस व्यवसायी समिति तुलसीपुर दाङले पनि आफ्ना सवारी साधन एक घन्टा नचलाउने निर्णय गरेको छ । सिमितिका अध्यक्ष सुरेश हमालले प्रतिष्ठित व्यापारी राजकुमार श्रेष्ठको हत्याको विरोधमा समितिका गाडिहरु शनिवार विहान ९ बजेदेखि १० बजे जहाँ चल्दै छन् त्यही रोकेर विरोध जनाउने जानकारी दिए ।
तुलसीपुरका प्रतिष्ठित व्यापारी राजकुमार श्रेष्ठको अपहरण पछि तुलसीपुर शोकमा डुवेको छ । श्रेष्ठको शव फेला परेको खबर सार्वजनिक भए लगतै तुलसीपुरवासी एकाएक श्रेष्ठको निवास पुगेका थिए । मानिस यति धेरै पुगेका थिए कि वसपार्क आवात जावात गर्ने एकतर्फी बाटोमा प्रहरीले सवारी आवात जावात रोक्नु परेको थियो । पछि श्रेष्ठको शव हेलिकोप्टर मार्फत सल्यान वाट ल्याएर राप्ती अञ्चल अस्पतालमा पोष्ट मार्टमका लागि लगिएपछि त्यहाँ ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेका सबै शोक मग्न थिए । आँखाभरी आँशु टिलपिलाएका देखिन्थे ।
ईप्रकामा पत्रकार सम्मेलन हुन सकेन
शुक्रवार साँझ साढे ६ बजेतिर ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलनको तयारी भएको थियो । तर त्यहाँ अपहरणकारी र हत्याका अभियुक्त सार्वजनिक गर्ने खबर पाएपछि वजार उर्लेर ईप्रका पुगेको थियो । वाहिरैवाट ‘अपहरणकारी र हत्यारालाई फाँसी दे’,भन्ने नारा सर्वसाधारणले लगाएका थिए । ‘सायद यसरी भिड उर्लेर कहिलै ईप्रका पुगेको अहिले सम्म इतिहास थिएन ’ ईप्रकाका एकजना प्रहरीले भने ‘ तर, अत्याचारका विरुद्ध तुलसीपुर उर्लियो ।’ ईप्रका तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलन हुन नसकेपछि भिडलाई छल्दै प्रहरीले गुल्ममा लगेर पत्रकार गरेको थियो ।
– नारायण खड्काले लेखेकाे अार समाचार अनलार्इनबाट साभार गरिएकाे ।
ट्याग्स: dang hatya